Senna (မယ်ဇလီ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » Senna (မယ်ဇလီ)
မယ်ဇလီဟာ FDA ကခအသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ဆေးညွှန်းမလိုတဲ့ ဝမ်းနုတ်ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဝမ်းချုပ်တာကို သက်သာစေဖို့အတွက် နဲ့ စအိုကနေပိုက်ထည့်ပြီးမှန်ပြောင်းဖြင့်ကြည့်နည်း (colonoscopy) မလုပ်ဆောင်ခင်အူမကြီးအတွင်းသန့်ရှင်းစေဖို့အတွက်အသုံးပြုပါတယ်။ မယ်ဇလီကို နာတာရှည်အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာစု (irritable bowel syndrome)၊ လိပ်ခေါင်းရောဂါ (hemorrhoids) နဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းစေဖို့အတွက်လည်း အသုံးပြုပါတယ်။ဆေးဖက်ဝင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကြောင့် နှစ်ခြိုက်စွာစားသုံးနေကြတဲ့ မယ်ဇလီရဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးအချို့ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
မယ်ဇလီရဲ့ အဆီကအရေးပြားပေါ်မှာဖြစ်တတ်တဲ့ နီမြန်းရောင်ရမ်းမှုတွေကို သက်သာစေပါတယ်။ အရွက်ကိုကြိတ်ခြေပြီး ရလာတဲ့အနှစ်ကိုပွေး၊အနာနဲ့အပူလောင်နာတွေအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ မယ်ဇလီမှာ ဘက်တီးရီးယားတွေကိုသေစေနိုင်တဲ့ အာနိသင်ရှိတာကြောင့် အရေပြားဆိုင်ရာရောဂါတွေ (သို့) အရေပြားပေါ်မှာဖြစ်တဲ့ အသေးစားကူးစက်ရောဂါတွေကိုကုသရာမှာ အထောက်အကူပြုပါတယ်။ မယ်ဇလီရွက် အနှစ်ကို ဝက်ခြံလိုမျိုး အရေပြားဆိုင်ရာ ကူးစက်ရောဂါတွေနဲ့နှင်းခူလိုမျိုး အရေပြားပေါ်မှာဖြစ်တဲ့ ကူးစက်ရောဂါတွေကို ကုသရာမှထြိရောက်စေပါတယ်။ မယ်ဇလီမှာပါတဲ့ acetone နဲ့ ethanol တို့က ဝက်ခြံဖြစ်စေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေကို တိုက်ဖျက်ပေးပါတယ်။
၂. ဆံပင်တွေကို သန်စွမ်းစေခြင်း
ဆံပင်တွေကိုချောမွေ့တောက်ပြောင်သန်စွမ်းစေဖို့အတွက် မယ်ဇလီရွက်ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ မယ်ဇလီအရွက်ခြောက်မှုန့်ကိုရေ၊ဒိန်ချဉ်တို့နဲ့ ဆတူရောစပ်ပြီး ဆံပင်ပေါင်းတင်ဆေးအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ သံပုရာရည်၊လက်ဖက်ဆီနဲ့အခြားဆေးဖက်ဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လည်းရောစပ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ရောစပ်ထားတဲ့အနှစ်ကို ဆံပင်ပေါ်မှာလိမ်းပြီး ပလပ်စတစ်ခေါင်းစွပ်နဲ့ ခဏစွပ်ထားပြီးခြောက်သွေ့အောင်ထားပေးပါ။ နာရီအနည်းငယ်ကြာထားပြီးတဲ့နောက်ရေဆေးချလိုက်ပါ။
မယ်ဇလီက ဆံပင်ကို သန်စွမ်းထူထဲစေတဲ့အပြင် အရောင်လည်းတောက်ပစေပါတယ်။ ဓါတုဗေဒပစ္စည်းတွေပါဝင်တဲ့ခေါင်းလျှော်ရည်တွေကြောင့် ဆံသားပျက်စီးတာတွေကိုလျော့ကျစေပါတယ်။ မယ်ဇလီကိုအသုံးပြုစမှာ ဆံပင်ကကြမ်းပြီးခြောက်သွေ့စေနိုင်ပေမယ့် ရက်အနည်းငယ်အကြာမှာ အစွမ်းသိသာလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
မယ်ဇလီက ဆံပင်အတွက် သဘာဝအရောင်တင်ဆေးတစ်မျိုးပါ။ မယ်ဇလီက ဒန်းဆိုးသလိုမျိုး ဆံပင်ကိုချက်ချင်းအရောင်တက်စေတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အချိန်နည်းနည်းတော့ပေးရပါတယ်။ မယ်ဇလီက ဒန်းလိုမျိုး ဆံပင်ကို နီကျင့်ကျင့်အရောင်ဖြစ်စေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ မယ်ဇလီမှာပါတဲ့ chrysophanic acid ကဆံပင်ကို အဝါရောင်ဖျော့ဖျော့ဖြစ်စေပါတယ်။ ဆံပင်ကိုရွှေအိုရောင်ဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ မယ်ဇလီမှုန့်နဲ့ ဆံပင်ပေါင်းတင်ပေးလို့ရပါတယ်။
မယ်ဇလီပင်က ဆံသားတွေကိုလှပစေရုံသာမက ဦးရေပြားကိုလည်းကျန်းမာသန်စွမ်းစေပါတယ်။ဗောက်တွေကိုလည်းသက်သာစေပါတယ်။ မယ်ဇလီက ဆံပင်အရောင်ကိုတက်စေပြီး ဆံပင်ကျွတ်တာကိုလည်း သက်သာစေပါတယ်။
၆. ဝမ်းချုပ်တာကို သက်သာစေခြင်း
ဝမ်းပျော့ပျော့သွားစေနိုင်တာကြောင့် မယ်ဇလီက ဝမ်းချုပ်တာကိုသက်သာစေပါတယ်။ မယ်ဇလီက အမရေိကန် FAD ကဆေးစာမလိုတဲ့ ဝမ်းနုတ်ဆေးအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ မယ်ဇလီက အူမကြီးကြွက်သားတွေကို ဝမ်းသွားရလွယ်ကူအောင်လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ မယ်ဇလီရွက်က အူနံရံတွေကို ကျုံစေနိုင်တာကြောင့် အူမကြီးကိုလှုပ်ရှားမှုကိုဖြစ်စေပါတယ်။ အူမကြီးကိုရေဓါတ်စုပ်ယူနိုင်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးတာကြောင့် ဝမ်းပျော့ပျော့သွားစေပါတယ်။ ဝမ်းတအားချုပ်တာမျိုးအတွက် သုံးစွဲပေးလို့ရပါတယ်။
မယ်ဇလီက ဝမ်းပျော့ပျော့သွားစေနိုင်တာကြောင့် အူမကြီးကို သန့်ရှင်းစေနိုင်တဲ့ဆေးဖက်ဝင်အပင်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ မယ်ဇလီရွက်ကို တရုတ်တိုင်းရင်းဆေးတွေမှာ အူမကြီးထဲက အပူအပုပ်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့ အသုံးပြုကြပါတယ်။ အစာအိမ်ထဲမှာ အစာဟောင်းတွေကျန်မနေအောင်လည်း အထောက်အကူပြုပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်မှာတော့ မယ်ဇလီကိုစအိုကနေပိုက်ထည့်ပြီးမှန်ပြောင်းဖြင့်ကြည့်နည်း (colonoscopy) မလုပ်ဆောင်ခင် နဲ့ အခြားအူမကြီးခွဲစိတ်အူမကြီးအတွင်းသန့်ရှင်းစေဖို့အတွက်အသုံးပြုပါတယ်။
၈. လိပ်ခေါင်း (hemorrhoids) ကိုကုသနိုင်ခြင်း
မယ်ဇလီရွက်က ရောင်ရမ်းတာကိုလျှော့ချပေးပြီး အနာကျက်မြန်စေတာကြောင့် စအိုအရေပြားစုတ်ပြဲခြင်းနဲ့ လိပ်ခေါင်းဝေဒနာတွေကို ကုသရာမှာ ထိရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဝမ်းပျော့ပျော့သွားစေနိုင်တာကြောင့် စအိုကွဲခြင်း (anal fissure) လိုမျိုးရောဂါတွေမဖြစ်အောင်အထောက်အပံ့ပေးပါတယ်။ အစာကိုကြေညက်အောင်မဝါးတာကြောင့် စအိုကွဲနာလိုမျိုးဝေဒနာတွေခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်။ မယ်ဇလီရွက်က အူလမ်းကြောင်းရဲ့လှုံ့ဆော်မှုကိုတိုးတက်စေပြီး ဝမ်းသွားရလွယ်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးတာကြောင့် လိပ်ခေါင်းဝေဒနာကိုသက်သာစေပါတယ်။
မယ်ဇလီရဲ့ဝမ်းပျော့ပျော့သွားစေနိုင်တဲ့ အစွမ်းကြောင့် အစာအိမ်နဲ့ အူမကြီးအတွင်းက သန်ကောင်တွေကိုဖယ်၇ှားသုတ်သင်ရာမှာလည်း မယ်ဇလီရွက်က အသုံးဝင်ပါတယ်။
၁၀. ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေတဲ့ မယ်ဇလီရွက်ရေနွေးကြမ်း
မယ်ဇလီရွက်ရဲ့ ဝမ်းပျော့ပျော့သွားစေနိုင်တဲ့အစွမ်းက ကိုယအလေးချိန်လျော့ကျအောင်လည်း အထောက်အပံ့ဖြစ်စေပါတယ်။ မယ်ဇလီရွက်က ဝမ်းမချုပ်အောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်တာကြောင့် အမျှင်ဓါတ်ပါဝင်မှုနည်းတဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျစေတဲ့ အစားအသောက်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ကယ်လိုရီပါဝင်မှုနည်းတဲ့ အရသာပြည့်စုံတဲ့သောက်စရာတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် ခန္ဓါကိုယ်ကို အရည်ဓါတ်ပိုရစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အရည်များများသောက်တာက အစားနည်းနည်းပဲစားဖြစ်စေပါတယ်။ မယ်ဇလီက အူမကြီးထဲက အဆိပ်အတောက်တွေ နဲ့ မကျေညက်တဲ့ အစာကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ အစာအိမ် အူလမ်းကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြီး အဆိပ်အတောက်ဖယ်ရှားတဲ့နည်းလမ်းက လိုအပ်သင့်တော်တဲ့ အာဟာရဓါတ်တွေကို စုပ်ယူနိုင်အောင် အထောက်အပံ့ပေးပါတယ်။ ဇီဝတွင်းဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲမှုကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီး ကိုယ်အလေးချိန်ကိုကျဆင်းစေပါတယ်။
မယ်ဇလီရဲ့ အဆီ၊အစေးနဲ့ မယ်ဇလီမှာပါတဲ့ အခြားဒြပ်ပေါင်းတွေက ဘက်တီးရီးယားတွေကိုသေစေနိုင်တဲ့ အစွမ်းရှိပါတယ်။ မယ်ဇလီက ဘက်တီးရီးယားတွေ၊မှိုပိုးတွေနဲ့ ကပ်ပါးပိုးတွေပေါက်ပွားရှင်သန်မှုကို ဟန့်တားပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ မယ်ဇလီရွက်ကို ခံတွင်းရောဂါတွေအတွက် ဝါးစားပေးနိုင်ပါတယ်။ မယ်ဇလီမှာပါဝင်တဲ့ရောင်ရမ်းမှုကိုလျော့ကျစေနိုင်တဲ့အစွမ်းသတ္တိက ကိုယ်တွင်းပိုင်းနဲ့ အပြင်ပိုင်းကရောင်ရမ်းမှုတွေကိုလျော့ပါးသက်သာစေပါတယ်။
မယ်ဇလီက အစာမကြေတာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ရင်ပူတာ၊ မအီမသာဖြစ်တာ၊လေပွတာနဲ့ ရင်ပြည့်ရင်ကယ်ဖြစ်တာတွေကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ မယ်ဇလီကို အခြားဆေးဖက်ဝင်အပင်တွေဖြစ်တဲ့ စမုန်နက်၊ချင်း။ ပူဒီနံ ၊ ဖာလာစေ့ တို့လိုမျိုး အစာအိမ်ထဲမှာလေထတာမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
မယ်ဇလီကဘေးကင်းပြီး ကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုတယ်ဆိုတယ်ဆိုပေမယ့်ရေရှည်သုံးစွဲတဲ့အခါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်ပေါ်ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ သတိပြုရမယ့် အချက်အချို့ကိုလည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
-မယ်ဇလီကို အလွန်အကျွံစားသုံးမယ်ဆိုရင် ဝမ်းလျှောစေနိုင်ခြင်း၊
-မယ်ဇလီနဲ့ ဓါတ်မတည့်တဲ့သူတွေမှာ ဆီးတွေအရောင်ပြောင်းသွားတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဓါတ်မတည့်မှုကြောင့် ဆီးတွေအရောင်ပြောင်းသွားတာမျိုးဖြစ်ပေါ်မယ်ဆိုရင် မယ်ဇလီစားသုံးနေမှုကို ချက်ချင်းရပ်တန့်လိုက်ပါ။
-anthraquinones ဓါတုဒြပ်ပေါင်းကိုရေရှည်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် အူမကြီးကင်ဆာကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အသေးစားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေအနေနဲ့ကတော့အော့အန်တာနဲ့ မအီမသာဖြစ်တာမျိုးတွေခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။
-မယ်ဇလီကိုရေရှည်သုံးစွဲမယ်ဆိုရင် ကြွက်သားတွေအားနည်းတာ၊နှလုံးလုပ်ငန်းစဉ်တွေ ကမောက်ကမဖြစ်တာ နဲ့ အသည်းပျက်စီးတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
-မယ်ဇလီရေနွေးကြမ်းကို အလွန်အကျွံသောက်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ အသည်းကို အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
-ရေတို အသုံးပြုမှုက ဗိုက်အောင့်တာ၊ဝမ်းလျှောတာနဲ့ ဗိုက်ထဲမှာ မအီမသာဖြစ်တာတွေလိုမျိုး ဆိုးကျိုးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ စက်တင်ဘာ 14, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း စက်တင်ဘာ 16, 2019
ရာသီသွေးအရောင် အနုအရင့်က ဖော်ပြနေတဲ့ လက္ခဏာ
ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ဆီးလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား, ကျန်းမာရေးအားလုံး, ကျန်းမာရေးစင်တာ
ဆီးကျောက်တည်တာကို သဘာဝအတိုင်း မြန်မြန်ပျောက်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
ကလေးနို့တိုက်နေစဉ်မှာ မိခင်တွေအနေနဲ့ အရက် ဘီယာ ရှောင်ရမှာလား